ဝစ်ရှင်နရီ:လက်ဖက်ရည်ဆိုင် - ဝစ်ရှင်နရီ
ဝစ်ရှင်နရီ > ဆွေးနွေးခန်းများ > လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
WT:TR ကို ဤနေရာသို့ ညွှန်းသည်။ ဘာသာပြန်များ တောင်းဆိုရန်အတွက် ဝစ်ရှင်နရီ:ဘာသာပြန် တောင်းဆိုခြင်းကို ကြည့်ပါ။ ဘာသာပြန်လမ်းညွှန်အတွက် ဝစ်ရှင်နရီ:ဘာသာပြန်ခြင်းကို ကြည့်ပါ။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဆွေးနွေးချက်တစ်ခု စတင်ရန် ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ။
ဝစ်ရှင်နရီ ဆွေးနွေးခန်းများ (တည်းဖြတ်) တောင်းဆိုမှုများ ကိုလည်း ကြည့်ပါ
အသစ် | မော်ကွန်းများ
လူသစ်များ၏ မေးခွန်းများ၊ ပြဿနာအသေးစားများ၊ အကူအညီ သို့မဟုတ် အချက်အလက် တောင်းဆိုခြင်းများ
ဝေါဟာရတို့၏ အနက်၊ အငြင်းပွားဖွယ်နှင့် ဇာစ်မြစ် စသည် ဆွေးနွေးရန်
အထွေထွေ မူဝါဒများ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အဆိုပြုခြင်းများ၊ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းနှင့် ကြေညာချက်များ
အသစ် | မော်ကွန်း
နည်းပညာဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ၊ တောင်းဆိုမှုများနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းများ
ဝစ်ရှင်နရီ: အမည်ညွှန်းများ ဆွေးနွေးခြင်းများ အားလုံး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ – ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာများ အားလုံး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅
၁ Universal Language Selector to replace Narayam and WebFonts extensions
၂ Global AbuseFilter
၃ Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open
၄ Movement Strategy and Governance News #5
၅ Additional question to the Call for Feedback about the Board of Trustees elections
၆ Leadership Development Task Force: Your feedback is appreciated
၇ Updates on the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Review
၇.၁ Upcoming Conversation Hours on 25 February and4March
၈ The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now closed
၉ Invitation to Hubs event: Global Conversation on 2022-03-12 at 13:00 UTC
၁၀ Universal Code of Conduct Enforcement guidelines ratification voting open from7to 21 March 2022
၁၁ Leadership Development Working Group: Apply to join! (14 March to 10 April 2022)
၁၂ Join the Community Resilience and Sustainability Conversation Hour with Maggie Dennis
၁၃ Universal Code of Conduct Enforcement guidelines ratification voting is now closed
၁၄ Leadership Development Working Group: Reminder to apply by 10 April 2022
၁၅ Join the Wikimedia Foundation Annual Plan conversations with Maryana Iskander
၁၆ Movement Strategy and Governance News – Issue 6
၁၇ Next steps: Universal Code of Conduct (UCoC) and UCoC Enforcement Guidelines
၁၈ 2022 Board of Trustees Call for Candidates
၁၉ Call for volunteers: 2022 Wikimedia Foundation Board of Trustees election
၂၀ Announcing the members of the Leadership Development Working Group
၂၁ Updates on the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines
၂၂ 2022 Board of Trustees Call for Candidates
Universal Language Selector to replace Narayam and WebFonts extensions
Please read the announcement on Meta-Wiki for more information. Runab ၁၄:၁၀၊ ၅ ဇွန်​ ၂၀၁၃ (UTC) (posted via Global message delivery)
— ၁၇:၃၆၊ ၁၄ နို​ဝင်​ဘာ​ ၂၀၁၄ (UTC)
RamzyM (WMF) ၀၃:၁၂၊ ၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) ၀၇:၁၄၊ ၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Additional question to the Call for Feedback about the Board of Trustees elections
RamzyM (WMF) ၀၃:၀၈၊ ၂၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Best, RamzyM (WMF) ၁၁:၅၆၊ ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) ၁၆:၃၇၊ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Upcoming Conversation Hours on 25 February and4March
Best, RamzyM (WMF) (ဆွေးနွေး) ၀၃:၁၉၊ ၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) ၀၈:၃၉၊ ၃ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
၀၉:၅၆၊ ၇ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)
RamzyM (WMF) ၀၀:၄၁၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) ၁၆:၁၂၊ ၁၄ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) ၁၃:၁၈၊ ၂၁ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) ၀၁:၂၅၊ ၂၅ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) ၁၃:၅၄၊ ၃၁ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) ၁၅:၅၄၊ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) ၀၆:၄၃၊ ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) ၀၂:၃၉၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) ၁၅:၄၇၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Call for volunteers: 2022 Wikimedia Foundation Board of Trustees election
RamzyM (WMF) ၁၀:၁၅၊ ၅ မေ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Announcing the members of the Leadership Development Working Group
RamzyM (WMF) ၁၆:၂၅၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Updates on the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines
RamzyM (WMF) ၁၂:၄၆၊ ၃၀ မေ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
RamzyM (WMF) ၀၃:၅၆၊ ၁ ဇွန် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wiktionary.org/w/index.php?title=ဝစ်ရှင်နရီ:လက်ဖက်ရည်ဆိုင်&oldid=876827" မှ ရယူရန်
အတိုကောက်ပါဝင်သော ဝစ်ရှင်နရီ စာမျက်နှာများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၀၃:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။